एक्कासी किन घट्यो १५० सिसी पल्सर बाइकको मूल्य ? – Ramailo Sandesh
यो पनि , नयाँ स्मार्टफोन नोकिया १.४ सार्वजनिक, यस्तो छ मूल्य र विशेषता:होम्स एचएमडी ग्लोबलले आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन नोकिया १.४ सार्वजनिक गरेको छ । ६.५१ इन्च इड्ज–टु–इड्ज सम्म फैलिएको यो स्मार्ट फोन नोकिया १ सिरिजकै सबैभन्दा ठूलो भएको एचएमडी ग्लोबलका हेड अफ पान एसियाका रवि कुँवरले बताए ।
यो पनि :भान्सामा प्रयोग गरिने चक्कु अब मसाजमा !!:तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, चक्कु सामान्यतया भान्सामा तरकारी, फलफुल र मासु काट्न प्रयोग गरिन्छ । तर अब भने मसाजका लागि चक्कुको प्रयोग गरिने भएको छ ।तपाईलाई यो टिप्स पढ्दा रोचक लाग्न सक्छ तर यो सत्य हो ।
टिप्समा जनाइए अनुसार मसाजमा चक्कुको प्रयोग ताइवानको मसाज पार्लरमा गरएको छ । त्यहा चक्कु मसाजको लागि प्रयोग हुँदै आएको छ।यस चक्कुबाट मसाज गर्ने बिधिलाई ‘डाउलियाओ’ भनिन्छ। जसको अर्थ ‘चक्कुबाट मसाज’ अर्थात् ‘नाइफ थेरापी’ भन्ने हुन्छ। यसको सुरुवात करिब दुई हजार वर्ष पहिले बौद्ध भिक्षुहरुले गरेका थिए ।
ताइवानमा भने अझै यस थेरापी निकै लोकप्रिय छ । ताइवानको राजधानी ताइपेइमा यो थेरापी सिकाउन एक एजुकेसन सेन्टर खोलिएको छ । यसको नाम हो ‘द एनशिएन्ट आर्ट अफ नाइफ’ मसाज डाओलियाओ आई–जिङ एजुकेसन सेन्टर । ताइवानमा यो एजुकेसन सेक्टरको ३६ ओटा शाखा छ ।
फ्रान्स, क्यानडा, हङकङ र जापानबाट पनि मानिसहरु यो थेरापी सिक्न ताइवान आउने गर्दछन् ।चक्कुबाट गरिने मसाजका फाइदा:सकारात्मक उर्जा उत्पन्न हुने,घाउ निको पार्ने,निन्द्रा राम्रोसंग लगाउने,शरीरको दुखाई कम गर्ने
यो पनि पढ्नुहोस् :के करणले विवाहपछि महिलाको पेट घट्दैन ?:पेट बढ्ने समस्या धेरैलाई भएको पाइन्छ । विशेषगरी विवाहित महिलाहरुमा यो समस्या अत्यधिक पाइन्छ । जिम जाँदा पनि कतिपयको पेट घटाउन मुश्किल पर्छ । विशेषगरी, ४० वर्ष कटेका महिलाहरुलाई त झनै पेटमा लागेको बोसो घटाउने काम निकै गाह्रो हुन्छ । किन हुन्छ पेट घटाउन मुश्किल ?
१. ४० वर्ष कटेपछि महिलाहरुको शरीरका मांसपेशीहरु कमजोर हुन्छन् । यसका साथै, उमेर बढेसँगै मेटाबोलिज्म कमजोर भइदिन्छ जसले बोसो पगाल्ने काम गर्न सक्दैन । २. महिनावारी, विवाह, गर्भधान, मेनोपोज जस्ता कारणहरुले हर्मोनमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ । जसले गर्दा शरीरका केही अंगहरुमा कडा खालको बोसो जम्मा हुन्छ ।
३.टेस्टोस्टेरोन र एस्ट्रोजन को स्तरमा कमि हुने कारण महिलाहरुको शरीरमा कडा बोसो जम्मा भइदिन्छ । पेटको बोसो घटाउन किन जरुरी छ ?शरीरका अन्य भागको तुलनामा पेटमा जम्मा हुने बोसो खतरनाक हुन्छ । पेटमा जम्मा हुने बोसोले सास फेर्न समस्या, मुटु रोग, मधुमेहको टाइप २, उच्च रक्तचाप र उच्च कोलेस्ट्राल जस्ता समस्या निम्त्याउँछ ।
विवाहपछि किन बढ्छ तौल ?अनुसन्धानका अनुसार विवाहपछि ५ वर्षमा ८२ प्रतिशत महिलाहरुको तौल ५ देखि १० केजीसम्म बढ्छ । शरीरका केही खास अंगहरु स्तन, हिप र पेटमा बोसो जम्मा हुन थाल्छ । खानपान, जीवनशैली, हर्मोनमा आउने परिवर्तन, तनाव, बढ्दो उमेर, गर्भधान जस्ता कुराले महिलामा तौल बढ्ने गर्छ ।